Madaxweyne Farmaajo oo xalay la kulmay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir | Baydhabo Online
Madaxweyne Farmaajo oo xalay la kulmay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay kulan albaabada u xirnaa la qaatay Guddoomiyeyaasha 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir, iyadoo kulankan uu ahaa kii u horeeyay Madaxweynuhu la qaato Guddoomiyeyaasha degmooyinka.
Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, kuxigeenadiisa, Xoghayaha Guud ee Gobolka Banaadir, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo saraakiil kale.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in aad looga hadlay amniga Gobolka Banaadir iyo sidii Guddoomiyeyaasha degmooyinka ay u qaadan lahaayeen doorkooda sugida amniga degmada ay madaxda u yihiin.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ka dalbaday Guddoomiyeyaasha degmooyinka inay xil weyn iska saaraan waajibaadkooda, isla markaana cid walba lagula xisaabtami doono howsha ay heyso.
Waxaa uu ku wargeliyay inay la shaqeeyaan Taliyeyaasha ciidamada xasilinta, si ay uga qeyb qaataan howl galada amniga caasimadda lagu sugayo.
Sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha ay ugu laab-qaboojiyeen Guddoomiyeyaasha degmooyinka in shaqadooda ka soo baxaan, isla markaana meesha ka saaray wararka maalmahan suuqa soo galay ee ku aadan in xilalka laga qaadayo.
Kulanka uu Madaxweyne Farmaajo la qaatay Guddoomiyeyaasha degmooyinka ayaa qeyb ka ahaa kulamo uu maalmihii la soo dhaafay uu Madaxweynaha la qaadanayay Taliyeyaasha ciidamada iyo laamaha amniga oo looga hadlayay arrimaha xasilinta Caasimadda oo todobaadyo ka hor dilal iyo qaraxyo ay ka dhaceen.